kulan lagu qiimeynayo qaab dhismeedka iyo dib u casriyeeynta hey’adaha dowladda oo Muqdisho lagu qabtey. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA kulan lagu qiimeynayo qaab dhismeedka iyo dib u casriyeeynta hey’adaha dowladda oo...
kulan lagu qiimeynayo qaab dhismeedka iyo dib u casriyeeynta hey’adaha dowladda oo Muqdisho lagu qabtey.
Kulankan oo lagu qabtay xarunta Akadeemiyada cilmiga Fanka iyo Suugaanta waxaa ka qeybgalay R/wasaare ku xigeenka dalka, wasiirka Shaqada iyo arrimaha bulshada,gudoomiyaha gudiga Qaran ee Shaqaalaha rayidka, agaasimayaal, madax waaxeedyo iyo mas’uuliyiin ka socotay hey’adaha dowladda.
Gudoomiyaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta oo kulankaasi ka hadlay ayaa codsaday in xafiisyada dowladda laga dhaqangeliyo afka Soomaaliga, isagoo tilmaamay in akadeemiyadu ay gogol u tahay hay’adaha dowladda.
Gudoomiyaha gudiga Qaran ee shaqaalaha rayidka ah Xasan Abshiroow ayaa tilmaamay in dib u habeyn lagu sameeyay 10 hey’adood, isagoo xusay in haddana la qorsheynayo in dib u habeyn lagu sameeyo hey’adaha kale ee dowladda si loo tayeeyo shaqada ay u hayaan bulshada.
R/wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed “Qadar” oo si rasmi ah u furay kulankaasi ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay mudnaanta siineyso dib u habeynta hey’adaha, isagoo tibaaxay in sanadkan uu yahay sanadkii waxqabadka iyo fulinta.
Previous articleGuddoomiyaha gobolka Benaadir oo kulan la qaatay Safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya
Next articleshir looga hadlayey dib u eegista Sharciga Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaliya oo lagu qabtey Magalladda Kismaayo